(ယက္ခ) ရဲကြီး- ပေး
on June 10, 2016 Related - Variety Article Yetkha Ye Gyi
" ဗန်းစကားဆိုတာ ရှင်သန်နေဆဲဘာသာစကားတိုင်းမှာ ရှိတယ်။ ဗန်းစကားများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း၊ ဗန်းစကားများသုံးစွဲခြင်းဟာ အပြစ်မဟုတ်ပါ။ ဗန်းစကားများဟာ သမိုင်း တလျှောက် ပေါ်ပေါက် ခဲ့ ပေါ်ပေါက်ဆဲ ဖြစ်တယ်။ သို့သော် ဘာသာစကားတမျိုးရဲ့ ဗန်းစကားအသစ်တွေကို စိစစ်ကြည့်ရင် ထွက်ပေါ်လာရာနေရာဇစ်မြစ်ကတဆင့် ဒီဘာသာစကား သုံးစွဲသူတွေရဲ့ အဆင့် အတန်း၊ လားရာ၊ အခြေအနေများ၊ စရိုက်၊ စိတ်အခြေခံ ရင်းမြစ်တွေကို ချောင်းကြည့်နိုင်ပါတယ် "
. . . ဗန်းစကားဆိုတာ ရှင်သန်နေဆဲဘာသာစကားတိုင်းမှာ ရှိတယ်။ ဗန်းစကားများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း၊ ဗန်းစကားများသုံးစွဲခြင်းဟာ အပြစ်မဟုတ်ပါ။ ဗန်းစကားများဟာ သမိုင်း တလျှောက် ပေါ်ပေါက် ခဲ့ ပေါ်ပေါက်ဆဲ ဖြစ်တယ်။ သို့သော် ဘာသာစကားတမျိုးရဲ့ ဗန်းစကားအသစ်တွေကို စိစစ်ကြည့်ရင် ထွက်ပေါ်လာရာနေရာဇစ်မြစ်ကတဆင့် ဒီဘာသာစကား သုံးစွဲသူတွေရဲ့ အဆင့် အတန်း၊ လားရာ၊ အခြေအနေများ၊ စရိုက်၊ စိတ်အခြေခံ ရင်းမြစ်တွေကို ချောင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
. . . ဆိုတော့ ဗန်းစကားများရဲ့ ထွက်ပေါ်ရာရင်းမြစ် source of origin ဟာ စိတ်ဝင်စား စရာ ကောင်းပါ တယ်။ အိမ်တအိမ်ကို နောက်ဖေးပေါက်ကတက်ကြည့်ရသလို ရှိတတ်တယ်။ အထက်ကပခဲ့တဲ့ ဗန်းစကား များရဲ့ ရင်းမြစ်ဟာ ရုန့်ရင်းညစ်ညမ်းတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ဆို မပြောဘူး။ ခင်ဗျားလည်း ခု နားလည် သွားရင် ပြောချင်မယ် မထင်တော့ဘူး။ မပြောတဲ့သူများလာရင် ဗန်းစကားသေပြီ။ ပျောက်သွားမယ်။ မကောင်းတဲ့ဘက်ကဲတဲ့ ၊ မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကို မောင်နဲ့နှမ ပြောလို့မကောင်းတဲ့ဗန်းစကားတွေ သေသွား တာမကောင်းဘူးလား။
. . . ဟော့ချင်လို့ ပေါ့ချင်လို့ဆိုရင် ဘေးလွတ်တဲ့ မရိုင်းတဲ့ ဗန်းစကားတွေပြောကြတာပေါ့။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အပြစ်ကင်းတဲ့ဗန်းစကားတွေ အများအပြားရှိပါတယ်။ "အကိတ်ကြီး"လို့ပြောပါ ၊ cake က လာတယ်။ "အလန်းလေး" လို့ပြောပါ ၊ မြန်မာစကား 'လန်း'ကနေ လာတယ်။ "ကွီး"လို့ခေါ်ပါ ၊ "ခေး ၊ ညလေး" လို့ ပြန်ခေါ်မယ်။ ရင်ဘတ်ချင်း ပလပ်ထိုးကြတာပေါ့။ မရိုင်းစိုင်းတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ မော်ဒန်လူ့ဘောင် တည်ဆောက်လို့ရပါတယ်။
. . . ဗန်းစကားတွေကို တော်လှန်ဖို့ မလိုပါဘူး။ တော်လှန်လို့လည်းမရဘူး။ ခင်ဗျားနဲ့ ကျွန်တော် မမွေးခင် ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ အဖေတွေက "ဇေပဲ" လို့ ပြောကြတာ။ ကျွန်တော်တို့အမေတွေက "ဒီလိုဆို လွန်တာပေါ့" လုပ်နေတာ။
"မိုက်တယ်" ဆိုတဲ့ စကားဟာ ဒီနေ့အားလုံးလက်ခံပြီးသားမြန်မာစကားဖြစ်နေပြီ။ တရားဝင် မဝင်ဆိုတာ စာအုပ်ကြီးထဲရေးထည့်မှ မဟုတ်ဘူး။ "မိုက်တယ်"ဆိုတာ ဒီနေ့မြန်မာစကားလုံး အစစ်အမှန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကားလုံးရဲ့ထွက်ပေါ်လာပုံကို ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ "ကောင်းတယ်" ဆိုတာကို "မိုက်တယ်" လို့ ပြောင်း သုံးတယ်။ မိုက်=ကောင်း ပဲ။ မူရင်းမှာ "မိုက်"ဆိုတာသည် "မကောင်း"။ ဆိုတော့ .. ဒီစကားလုံး ထွန်းကားတဲ့ကာလမှာ မြန်မာလူထုသည် "မိုက်ပြခြင်း"များကို သဘောကျကြသည်လို့ မတွေးနိုင်ဘူးလား။
ရဲကိုကို၊ ရဲမင်းပိုင်တို့ရဲ့ ဖိုက်တာကားတွေနဲ့ စည်ကားတဲ့ မြန်မာဗွီဒီယိုခေတ်ဦးရယ် 'မိုက်တယ်' ဗန်းစကား ထွန်းကားချိန်ရယ် တိုက်ဆိုင်မှုဟာ ဆက်စပ်မှုမရှိဘူးလို့ ပြောနိုင်မလား။ ဒီစကားလုံးအပေါ်တည်ပြီး "မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းမိုက်မဲမှုကို သဘောကျတတ် ကြသည်" လို့ ဥရောပသား တယောက်က ကောက်ချက်ဆွဲပြရင် .. ။
. . . ပိုဆိုးတဲ့ ဥပမာက "စော်"ပါ။ ကျွန်တော်တို့လည်းပြောကြတာပဲ။ ရှောင်လို့မရနိုင်အောင်ဖြစ်နေပြီလေ။ ကျွန်တော်တဦးတည်းရဲ့အသိစိတ်မှာ "စော်"ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မူရင်းအဓိပ္ပာယ်လည်းမသိပါ၊
ရိုင်းတယ်လို့လည်းမထင်ပါ ၊ လူကြီးတွေရှေ့မပြောသင့်တဲ့ ဗန်းစကား လောက်သာအသိရှိတယ်။
သို့သော် .. "စော် ဆိုသည်မှာ မိန်းမတို့၏ မအပ်မရာကိုခေါ်ညွှန်းခြင်း"လို့ ဆရာမြသန်းတင့်ရေးတာကို ငယ်ငယ်ကဖတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက် ခပ်ရိုင်းရိုင်းစကားလုံးကြီးဖြစ်မယ်လို့ တွေးယူကြည့်လို့ ရပါတယ်။ တွေး ကြည့်လို့ရသော်လည်း ခံစားလို့မရပါ။ ရိုင်းတယ်လို့ မခံစားရ။ ကျွန်တော်ချာတိတ်ဘဝမှာ အကြီးတွေက "ဟိုစော်လေး ၊ ဒီစော်လေး" တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ပြောနေပါပြီ။ ကျွန်တော်လည်း ကြီးလာတော့ ပြော ပါတော့တယ်။ ဘာသာစကားကိုကျွမ်းဝင်တတ်တဲ့ စာဖတ်အလေ့ရှိသော လူတယောက်မှာတောင် မကောင်းမှန်းလည်းသိပါလျက်နဲ့ "စော်"ဆိုတဲ့ ဗန်းစကားကို ဒူးထောက် ရခြင်းပါ။
. . . "စောက်" ဆိုရင်လည်း ရှောင်မရတဲ့ နေ့စဉ်သုံးဝေါဟာရဖြစ်နေပြီ။ သူ့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်(next generation) "စောက်ရမ်း" တောင် ပုံမှန်စကားဖြစ်နေပြီ။ "စောက်" ဆိုတာ တော်တော်ရိုင်းပြတဲ့ မြန်မာ စကားမှန်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိပေမယ့် အပြောခံရလို့သော်လည်းကောင်း ပြောမိလို့ သော် လည်းကောင်း နင့်နင့် နဲနဲ မခံစားရပါဘူး။ "အဲဒီကောင်မကိုစောက်မြင်ကပ်တယ်"၊ "စောက်ရမ်း မိုက် တယ်ဟေ့ရောင်" .. ကြားရတာရှောရှောရှူရှူပါပဲ။ "စောက်သည်းပေါက်တယ်"ဆိုတဲ့ ဗန်းစကားလေး ဆိုသဘောကျလို့ တခါတခါပြောမိသေး။
. . . ဗန်းစကားတခုရဲ့အစပြုရာဇစ်မြစ်ကို သိမြင်နိုင်ရင် လုံလောက်ပါတယ်။ သိပြီးမှ ပြောချင်တယ် မပြောချင်ဘူးဆိုတာ၊ ပြောသင့်တယ် မပြောသင့်ဘူး ဆုံးဖြတ်တာတွေက လူတဦးချင်းရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်တယ်။ လူတဦးစီဟာ သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာအဆင့်အတန်း၊ စရိုက်၊ အတွင်းစိတ်အခံ၊ ဘဝခံယူ ချက်၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအလျောက် သူနှစ်သက်သလို ဗန်းစကားတွေကို သူ့ဘဝမှာ အသုံးပြုသွား ကြမှာပါပဲ။ ကိုယ်ပိုင်သမိုင်း ကိုယ်စီပေါ့။
ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် တန်းစီပြီးဝယ်ရတဲ့ လက်မှတ်ကိုတောင် လက်မှတ်ရောင်းက သူ"ရောင်းပေးလိုက်တယ်" ဆိုပဲ။
တရက်နဲ့ ပြီးရမယ်လို့ တရားဝင်ဆိုထားတဲ့ ရုံးအလုပ်ကို တလနီးပါးကြာအောင် အခေါက်ခေါက် အခါခါသွားရပြီးတဲ့အဆုံးမှာ လက်မှတ်ထိုးပေးတဲ့ အရာရှိကြီးက ဘောပင်ကိုင်ရင်း "လုပ်ပေးလိုက် တယ်နော်" လို့ပြောတတ်တယ်။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲဝင်လာတောင်းတဲ့ သူတောင်းစားကို "အကြွေမရှိသေးလို့" လို့ပြောတော့ "ပြန်အမ်းပေးမယ်" လို့ ပြောပါတယ်။
. . . ဗန်စကားတွေက လူလိုက်၊ နေရာလိုက်ပြီး ကြုံရကြားရတတ်ပေမယ့် "ပေး" ကတော့ ကျားမ ကြီးငယ် ရဟန်းရှင်လူ အဆင့်အတန်းမခွဲ ကြုံလာကြားလာရတယ်။ တိုက်ပုံကြီးကလည်း "ပေး" ၊ ဘုန်းဘုန်းက လည်း "ပေး" ၊ အလုပ်သမားကလည်း "ပေး" ၊ သူတောင်းစားကလည်း "ပေး" ၊ ဆရာသမားကလည်း "ပေး"။ နေရာလည်းမရွေးဘူး။ လမ်းဘေးကနေ နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားထိ သုံးနိုင်တယ် ၊ သုံးနေတယ်။
. . . ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ ပရဟိတအနေနဲ့ အခမဲ့စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဆေးကုထွက်တဲ့အခါ "ဆေးကုပေးတယ်"လို့ ပြောဖြစ်ပေမယ့် ၊ အခကြေးငွေယူပြီး ဆေးကုရတဲ့လူနာတွေကို "ဆေးကုတယ်"လို့ ပဲ သဘောထားသုံးနှုန်းတယ်။